Abazali abaningi babhekene nenkinga enjengokungaboni kahle komzimba ebusweni bomntwana wabo. Lapho kubhekene nezingane, kunomthelela we-allergen ngendlela ye-rashes, izindawo ezibomvu, nokukhanda isikhumba. Futhi, ukungezwani komzimba kungabonakaliswa ngokuvuvukala kwe-mucosa yomzimba, ukusika emehlweni, ukukhipha futhi ukuhambisana nokuphefumula okukhulu, ukuzwakalisa, ukuphefumula okukhulu, njll. Ngokwayo, ukungezwani komzimba ebusweni bezingane kuyindlela yokuzivikela yomzimba emzimbeni othile, ngoba izingane zinomzimba omzimba obuthakathaka. Izifo ezinganeni kufanele ziphathwe ngendlela efanele, njengentuthuko, zingabangela izifo ezifana ne-atopic dermatitis, i-edema ka-Quincke, i-asthma ye-bronchial kanye nabanye.
Izifo ezivame kakhulu
Izifo ezivame kakhulu ziyimikhiqizo yokudla. Isibonelo, amaqanda, ubisi lwezinkomo, izithelo ze-citrus, amantongomane, izinhlanzi zasolwandle, njll. Futhi, izifo ezitholakala ebusweni zingabonakala ezinganeni ngenxa yokusetshenziswa kwemithi ethile (i-sulfonamides, i-anesthetics yendawo, i-penicillin, i-sulfonamide, i-salicylates). Izifo ezivamile ezivamile ziyizi: i-pollens yezitshalo, izindlu zomfucuza wendlu, isikhunta isikhunta, uthuli, izinkathi, ukulunywa kwezinambuzane, amakhemikhali, izilwane ezifuywayo.
Isizathu esiyinhloko sokungezwani komzimba ebusweni kubantwana yisimiso sokuzivikela somzimba esibuthakathaka. Ngokuvamile, ukusabela okweqile ebusweni bezingane kubonakala ngenxa yokwethulwa komkhiqizo omusha wokudla kwimenyu. Uma uqaphela ukuthi umntwana unezimpendulo ezithathelisayo ebusweni, ungalibali ukuvakashela kudematologist. Ezimweni eziningi, ochwepheshe ezimweni ezinjalo benza ukuxilongwa - i-diathesis. Ungavumeli ukuthi lesi sifo sibe sibi kakhulu, ngaphandle kwalokho amabala emathunjini azoba abomvu obomvu, i-diathesis ingase ivele kwezinye izingxenye zomzimba. Lezi zilonda ziletha ingane enkulu ukukhathazeka.
Ukwelashwa kwezifo emzimbeni ebusweni
Ukwelashwa kwalesi sifo ezinganeni kulawo macala kuhloswe ukuvimbela izilonda, ukususa ukucasuka. Ukwelashwa okungcono okudidiyelwe kunokumane ukhulule izimpawu. Kubalulekile ukukhipha othintana naye nalokhu noma leso-allergen. Ngokuvezwa okuphindaphindiwe kwe-allergen emzimbeni wezingane, ukusabela kungase kubi kakhulu.
Izindawo eziningana zihlanganisa ukwelashwa kwezifo ezinganeni. Okokuqala, ukudla okhethekile kunqunywe ochwepheshe. Ukudla kunqunywe ngabanye kumntwana ngamunye. Ngesikhathi esifanayo, ukwelashwa kwezifo ezihambisanayo (ngokuvamile zibangelwa ukwelashwa). Lokhu kwenzeka ezimweni eziningi ze-dyskinesia biliary tract, i-gastritis, i-dysbiosis yamathumbu. Kubalulekile futhi ukuphatha isikhumba ebusweni.
Ngokwelashwa kwendawo yesikhumba, i-dermatologist noma i-allergenist ibeka amalungiselelo okwelapha okusiza ekunciphiseni ukuvuvukala kwe-allergen, imithi edingekayo ekunakekeleni isikhumba. Uma izidakamizwa zikhethwe ngokufanele, izinkinga eziqhubekayo ze-allergies kanye nokuguqulwa kwesifo kufomu elingapheli kungagwenywa.
Ngaphandle kokusebenzisa izindlela zangaphandle, ukwelashwa kwangaphakathi kwalesi sifo kwenziwa ngesikhathi esisodwa. Iqiniso liwukuthi amafutha amaningi agqugquzela ukubonakala kwe-allergies ebusweni kuphela. Uma ungasebenzisi ukwelashwa kwangaphakathi, lesi sifo sizohlala. Uma ukwelashwa okungalungile kungabangela izinkinga. Isibonelo, izinguquko ze-pathological ku-mucosa yama-nasopharyngeal, i-bronchi, i-tract emathunjini.
Uchwepheshe futhi ubeka izidakamizwa zokuvimbela ingane. Zibekiwe ngokuqinile, kuye ngokuthi iminyaka yengane. Ama-antihistamine ngokuvamile ahlelwe ngesikhathi esiyinkimbinkimbi yesifo. Udokotela kufanele alawulwe ngokuqinile ekudleni kwezidakamizwa.
Udokotela ekwelapheni ukungezwani komzimba ebusweni bezingane kufanele anikeze ukulungiswa kwezifo ezithinta izifo zesisu. Uma izifo ezivumelanako zingelapheki, khona-ke lokhu kungabangela ukuphindaphinda kwesikhumba. Lokhu kungakhathaliseki ukuthi ukunakekelwa kahle kwesikhumba kwenziwa ebusweni futhi ukudla okuhambisanayo kubonakala. Uma unomphumela wokuzizwa ezinganeni, qiniseka ukuthi uxhumane nochwepheshe.
Ukunakekela ingane ngaphambi kwesikhathi, izinkinga ezingenzeka
Ingozi yangempela empilweni nasezempilo zezingane
Izici zokwelashwa komkhuhlane ezinsana nasezinsaneni
Indlela yokukhulisa ingane
Ukufutheka kwezingane zasenkulisa
Yeka masinyane ukususa ukukhathala futhi uthole amandla ngokushesha
I-Pasta ne-bacon ne-Parmesan ushizi
Uzoba yini umnotho waseRussia 2015
Kufanele udle kanjani ukuze ube nobisi oluningi lwebele?
Izindlela zendabuko zokuphatha ama-hemorrhoids
I-mousse ye-chocolate ne-souffle kwelinye iresiphi
Isaladi ngamabhontshisi amnyama
Inkukhu ebhakawa nelamula ne-rosemary
Indlela yokwenza isimemo emshadweni ngezandla zabo siqu
Indaba Yempumelelo Yabesifazane Yabesifazane
Ungabhaka kanjani ikhekhe le-chocolate kwi-multivariate: iresiphi esiphundu futhi esheshayo yendebe ngesithombe
Ziyini izimbangela zesisu somntwana emntwaneni?